Free psn codes | Free psn code generator | Free psn card codes that work
musha // Blog // Free psn codes
100% KUSHANDISA PASI PASI PSN CODE GENERATOR
Hazvingave zvakakonzera here kana iwe ukwanisa kuwana zvinhu zvekusununguka? Wakave wakambofunga nezvekuwana chimwe chinhu nechokudonho chebhatani? Vakawanda vevanhu vari kunze uko ikozvino vanoenda kune zvikwereti zvisingabhadharwi kana kuti mahwendefa e PSN ari paIndaneti. Na vedu vakasununguka PSN code generator, zviitiko zvechokwadi zvakavimbiswa!
Basa re PSN rinopiwa ne Sony mumutambo wekudhirozesa weDhidhiyo. Kudzoka munaNovember 2006, apo yakangowanikwa chete yeVideo PlayStation consoles, hakuna munhu aiziva kuti yaizopararira kupararira. Gare gare, yaive yakafambidzana nevanosangana neBlu-ray, mafoni uye maTV. Pamusoro pevanhu vane mamiriyoni e130 vari kushandisa sangano rePSN sezvazviri iye zvino uye nhamba icharamba ichiwedzera chete. Kuvandudza ruzivo rwemutambo we gameplay ndicho chikonzero chikuru chekushandiswa kwebasa iri uye PSN inonyanya kunyorera muchengeti wekuInstall Store Store.
User guide uye uchapupu
Saka ndezvipi zviratidzo zvePPN?
Kana iwe uri rudzi rwevaverengi avo vakangopfuura nepaguru iyi nekukanganisa, heinoi mamwe chiedza pamusoro penyaya. Nheyo dze PSN dzinogona kushandiswa chete muPadhesi yePadStation. (Zvakanaka zvakajeka, duh!). Icho chirongwa chinosanganisira kuenzaniswa kwakasiyana kwemajeri uye nhamba dzingashandiswa kuwana chimwe rudzi rwemubairo. Iwe unogona kuwana huri hwehutano kubva kubva pamwedzi kusvika kumwedzi we12. Zvaunosunungura chaizvo ndezvekusvika kumitambo yakasiyana-siyana yepachena uye muInternet network ye PlayStation. Nhamba ye PSN inogona kushandiswa chete kana isina kumboshandiswa kare. Chengetani 1 munhu achawana kushandiswa neshoko rimwechete. Mushure mokunge mauya muIndaneti yako ye PlayStation, unogona kuenda chikamu chechitoro che PlayStation uye pinda code yako ipapo. Izvi zvinosvitsa mwedzi yekutambira yemitambo ye PlayStation zvichienderana nekukosha kwekadhi rako rePSN.
Nguva yekutora zvinyorwa zvepachena!
Pane nzvimbo dzakawanda kunze uko dzinoti dzinopa vakasununguka PSN nheyo dzinoshanda kana kuti vakasununguka PSN code generator izvo zvinowanzoita kutengesa PlayStation peeps. Vakawanda vavo, zvisinei, havanamatira kune zvavanotaura uye vanopedza kuparadza nguva yako inokosha kana kuisa mamwe mavhirwere ane utachiona anogona kukuvadza system yako. Somugumisiro, iwe unopedzisira usina purogiramu yePSN uye unopedzisa kukanganisa kombiyuta yako. Uyewo, rimwe basa rinoshungurudza raunofanira kupedzesa raizova tsvakurudzo dzisingagumi kuti uwane magwaro. Nguva yakawanda panguva yekuguma kweongororo, kana ivo vanopedzisira vachiti iwe hauna kukodzera kana iwe uchasangana nehusiku hwako hwakaipa, HERE CODES!
Asi! Izvi hazvisizvo kwatiri isu sekugutsikana kwako ndiko mufaro wedu. Isu tinoita kuti zvive zvakachengeteka zviitiko uye zvakanyatsoshanda zvinoshandiswa nePPN codes iwe unogona kuzvidzikinura muShoko reSpredStation.
Sei uchida kushandisa sangano redu? Pretty simple:
Chizvarwa chedu nguva nguva iyo yakaita shoma kana ichienzaniswa kune dzimwe nzvimbo. Nhamba dzinokurumidza uye dzakachengeteka pasina kubhadhara chero mutengo. Kunoshamisa?
Pane zvachose chakakosha kuti chiitwe kusununguka PSN nhamba iyo inoshanda! Isu tinogadzira zvinyorwa pamaseva edu. Hassle rusununguko rusununguko uye rwakachengetedza ruzivo. Mashumiri edu akachengetedzwa zvakanaka, saka tinovimba nechimwe chinhu chinoshamisa!
Nhare dzedu dzichagara dzakasununguka nguva dzose. Mitsva itsva uye itsva inowanikwa kwose kwose kudzikinura. Slow services dzinofanira kunge dzisina kutarisirwa kubva kwatiri. Hatimboiti kutora. Tinozviita nenzira yekukurumidza!
Kune dzimwe nzira dzakasarudzwa dzokusarudza kubva. Masangano emakadhi edu anouya mumhando dzakasiyana dze $ 10, 20 $ uye 50 $. Inzwa wakasununguka kusarudza kadhi yaunoda uye ndeyako!
Kusiyana nedzimwe nzvimbo dzenhema apo dzinongoerekana dzichigadzira nhamba ye nhamba, tinotenga makadhi e PlayStation uye tinoiparidzira kuvashandi vedu vanodikanwa sekuti kana mari yedu yakagadzikana.
Iwe haufaniri kunetseka pamusoro pezvinotyisa zvakapararira. Isu hatina mharidzo yekuparidzira mharidzo kunyange zvazvo mari yedu yakazara zvachose kubva mumashambadzi chete. SO hapana nyaya pamusoro pezvo zvakare!
Nhandare yedu inowanika kune inenge nyika dzose dzekutamba ine database yakanaka yevashumiri. Saka vatambi vemagariro akasiyana-siyana enyika vanoda kunetseka pamusoro pazvo. Zvose zvinoitwa kutarisirwa. J
ZVAKO MUDIRIRA CHII ?!
Kungongova musoro kumusoro kwedu vakasununguka PSN code generator uye chengeta pazvigadzirwa! Zvingava nyore here kupfuura izvi? Nguva yekumirira inopfuura mashoma 30 zvakare. Zvinowanzoitika kana iwe gamberi usinetseka isu. Inonzwisisika zvachose nekuda kwenhamba yakawanda yeweax websites. Saka sei usina kuzvipfura uye unozvionera?
HERE FREE PSN CODES WEMWE MUNHU! Kurumidza, Kuchengeteka, Kuchengeteka uye Kuvimbika! Vanonyangadza vanotiona tichigumburwa, ivo vanovenga!
49 Comments ONI " Free psn codes "
noname November 28, 2017 pa 7: 50 pm - pindura
Handina kumboona chinhu chakadai
Vengence November 28, 2017 pa 7: 52 pm - pindura
Ndinokutendai zvikuru zvakashanda zvakanaka zvakachengetedza
Tommy Bill November 30, 2017 pa 3: 38 pm - pindura
NDI MWARI. KUDAI A TONS!
Woody December 1, 2017 pa 6: 34 am - pindura
One Core December 3, 2017 pa 9: 27 am - pindura
Kushanda pa 50 USD chipo kadhi, regai kuona ...
Homulus December 8, 2017 pa 2: 15 pm - pindura
BMWFan December 14, 2017 pa 7: 30 am - pindura
Krisimasi muti December 20, 2017 pa 7: 15 pm - pindura
Emil December 23, 2017 pa 10: 36 am - pindura
Zvose izvi zvinotora soooooong
Emil December 23, 2017 pa 10: 39 am - pindura
asi yakanga yakakodzera
Ramen January 3, 2018 pa 7: 34 am - pindura
akatora nguva asi pakupedzisira yakashanda
Anthony January 9, 2018 pa 10: 05 am - pindura
Fred January 17, 2018 pa 6: 24 am - pindura
Ditch January 17, 2018 pa 7: 35 am - pindura
Mabasa anonyatsofadza munhu!
Mambo Artur January 22, 2018 pa 6: 39 am - pindura
hamza January 27, 2018 pa 2: 35 am - pindura
ps4 username elitebro786 mumwe munhu chindiitira ini.
turtles January 28, 2018 pa 10: 49 am - pindura
got 3 akashanda psn ma code, haazowanizve nhasi
zonne February 9, 2018 pa 8: 23 am - pindura
Vakadzi vanoenda kukicheni February 22, 2018 pa 1: 28 pm - pindura
Zvose zvaunoda, iwe unazvo, zvose zvaunoda iwe wakazviwana, chero chinhu chipi zvacho chaunacho
Legit, nyore uye inokurumidza March 1, 2018 pa 10: 35 am - pindura
Legit, nyore uye inokurumidza
Tricky March 22, 2018 pa 7: 07 pm - pindura
GOTI CHIMWE CHOMWE WEMUNHU WANGU
Demilo March 28, 2018 pa 10: 57 pm - pindura
Iwe unogona kundibatsira here?
Foxy_foire March 29, 2018 pa 9: 22 am - pindura
Terminator April 12, 2018 pa 6: 31 am - pindura
Yakagamuchira code yangu: 3
Tron April 26, 2018 pa 4: 57 pm - pindura
Yakagadzirwa 3 codes nhasi 😀 looooooooooooool
psnmaster May 3, 2018 pa 5: 36 am - pindura
Ndakagamuchira my psn codes
shiri May 17, 2018 pa 7: 11 pm - pindura
Ndakatenga mimwe mitambo kwandiri:>
Dude_pls May 24, 2018 pa 1: 33 pm - pindura
Unogona kundibatsira here? My skype is terminator2001
tron May 31, 2018 pa 1: 54 pm - pindura
great thanks (y)
asam June 20, 2018 pa 8: 17 am - pindura
Tjokyo July 5, 2018 pa 10: 35 am - pindura
zvakanaka, ikozvino ndiri kufara kwazvo 🙂
Bontager July 22, 2018 pa 11: 32 am - pindura
kusviba Svondo 7, 2018 pa 5: 22 am - pindura
Dhariyasi Svondo 20, 2018 pa 7: 29 am - pindura
Yakabudirira kuregererwa 50 $ gift card: p
Miyagiy Svondo 27, 2018 pa 7: 47 am - pindura
Ndinonyatsokoshesa mutungamiri uyu
karakam October 4, 2018 pa 7: 59 am - pindura
Wakawana makadhi ekupa pachena kune shamwari dzangu neizvi
Robby October 11, 2018 pa 8: 16 am - pindura
Ini handirevi kutenda
1337 October 25, 2018 pa 9: 44 am - pindura
chinhu chacho chaicho
Bhabheri November 15, 2018 pa 11: 35 am - pindura
Babheri November 22, 2018 pa 8: 43 am - pindura
varume, ndine kadhi yekushanda kubva pano!
grador November 29, 2018 pa 10: 58 am - pindura
Derik December 13, 2018 pa 8: 51 am - pindura
Budhasa December 20, 2018 pa 8: 51 am - pindura
darh January 3, 2019 pa 12: 09 pm - pindura
Galan January 17, 2019 pa 3: 18 pm - pindura
Ndinofara kuti ndakawana iyi webhusaiti
krush February 7, 2019 pa 4: 28 pm - pindura
ps4 February 21, 2019 pa 6: 28 pm - pindura
Iwe ndiwe wakanakisisa
Kana February 28, 2019 pa 4: 52 pm - pindura
prawn March 7, 2019 pa 2: 57 pm - pindura
Yakanzwika zvikuru kuti irege kuva yechokwadi kubva pakutanga